Taariikhaha Muhiimka ah iyo Xogta Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Ujeedka Fasaxa 2014 | Martech Zone
Sanadkii la soo dhaafay, 1tii qof ee macaamiisha ahba 5 ayaa sameeyay DHAMMAAN ciiddooda Kirismaska dukaamaysiga internetka! Yikes… waana la saadaaliyay in sanadkaan, seddex meelood meel dhamaan dadka wax ka iibsada internetka ay wax ku iibsadaan iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah ama kaniiniga. 44% waxay wax ka iibsanayaan kiniin yar qof walbana wuxuu isticmaalayaa moobilkiisa si uu wax uga iibsado. Waxaad ku jirtaa xaalad qallafsan sannadkan haddii aadan wax ka beddelin boggagaaga iyo emaylkaaga mobilada iyo kiniiniyada wax iibsada - laakiin marna kama daahin inaad isku daydo oo aad sameyso
Waxaa jira 6 taariikho muhiim ah oo ay tahay inaad kuhesho riixitaanka bulshada, mobilada, iyo emaylka safka oo aad diyaar u ahaato inaad sanadkaan horumariso. Anigoo ah tafaariiqle khadka tooska ah, waxaan fiiro gaar ah siin lahaa dhammaadka usbuuca ka dib Thanksgiving ilaa iyo Kirismaska ​​si aan diiradda u saaro farriinta.
Goorma ayey tahay Thanksgiving? (US) - Khamiista, Nofeembar 27
Waa Goorma Jimcaha Madow? - Jimco, Nofeembar 28
Goorma ayey tahay Sabtiga Ganacsiga Yar? - Sabti, Nofeembar 29
Goorma ayey tahay Cyber ​​Isniinta? - Isniinta, Diseembar 1
Goorma ayey tahay Hanukkah? - Talaado, Diseembar 16th illaa 24th
Goorma ayey tahay Ciidda Kirismaska? - Arbaco, Diseembar 24th
Goorma ayey tahay Maalinta Kirismaska? - Khamiista, Diseembar 25
Goorma ayey tahay Maalinta Feerka? - Jimco, Diseembar 26th
Iyo dabcan, ha uga tagin maalmaha ugu dambeeya sanadka kuwa wax iibsanaya kadib fasaxa! Waxay jecel yihiin heshiis wanaagsan.
Fiiri dhammaan tirooyinka cajiibka ah ee lagu soo ururiyey boggan Fasaxa Iibinta Fasaxa ee kooxda at AmeriCommerce.
Tags: jilicsan madowmaalinta feerkamasiixigaHabeenka krismaskaduubka internetkaHanukkahiibinta mobilada fasaxaiibinta fasaxainfographiciibinta mobiladaganacsiga yar yar ee sabtidamahadnaqid
Tabaha 7 ee Kordhinta Iibsigaada Dukaamada Fasaxa